Tattoos lambarrada Carabiga ah, kala sooc | Tattoo
Tattoos lambarrada Carabiga ah, kala sooc
ka Tattoo lambar Carabtu nidaam baa ku ilhaamiyay nambar waa maxay ... laakiin sug! Xaqiiqdii, waxaa jira nidaamyo lambarro Carabi oo kala duwan oo loogu talagalay waxyi.
Markaa wax dhibaato ah naftaada haku samayn, qodobkaan waxaan ku diyaarinay sharrax kooban oo ku saabsan labada ugu muhiimsan: Tirada Carabiga Bariga iyo Galbeedka.
1 Lambarada Carabiga Galbeedka ama lambarrada Carabiga
2 Tirooyinka Carabiga Bari
Lambarada Carabiga Galbeedka ama lambarrada Carabiga
Xaqiiqdii tirooyinkani wax badan ayey kaaga eg yihiin, runtiina, waa kuwa aan maalin walba u isticmaalno. Waxay asal ahaan ka soo jeedaan xisaabiyeyaashii xisaabaadka Hindiya, kuwaas oo horey u isticmaali jiray sannadka 500 BC, in kasta oo aysan Yurub gaarin illaa 1202!
Waxaa u mahadceliyay Fibonacci, oo ah xisaabyahan Talyaani ah oo, mid ka mid ah safaradiisii ​​badnaa ee uu ku tagay badda Mediterranean-ka iyo Waqooyiga Afrika, wuxuu helay lambarrada Carabiga oo wuxuu gartay inay aad uga sahlan yihiin adeegsiga marka loo eego tirooyinka Roomaanka, oo ah kuwa ugu badan ee xilligaas ka dhaca Yurub. Iyada oo gacan ka heleysa Liber abaci, tirooyinka Carabiga waxay gaareen caan weyn oo ay maanta leeyihiin.
Tirooyinka Carabiga Bari
Waxaad ka heli kartaa lambarrada carabeed ee bariga ee soo jiidashada leh tirooyinka lambarrada Carabiga ah, kuwaas oo oo hada laga isticmaalo wadamada bariga ee dunida carabta (badiyaa waxay kuxirantahay nambarada carabta ee reer galbeedka), tusaale ahaan Masar, Iiraan, Cumaan, Sacuudi Carabiya, ama Imaaraatka Carabta.
Isla markiiba, waxaa jira laba nooc oo kaladuwan oo waaweyn, Carabi iyo Beershiyaan, waxayna kuxirantahay in Urdu looga hadlo wadamada laga isticmaalo.. Xaqiiqdii, kala duwanaanshuhu waa mid aad u yar, kaliya lambarrada 4, 5 iyo 6.
Ugu dambeyntiina, haddii aad doorato lambarkan markii aad sameyneyso tattoo, waxaa muhiim ah inaad maskaxda ku hayso taas, In kasta oo Carabiga laga qoray midig ilaa bidix, tirooyinka gadaal baa loo qoraa, bidix ilaa midig.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan tattoos-ka tirada Carabiga uu adiga kuu xiiso badnaa. Noo sheeg, ma leedahay wax sawir ah oo leh lambarro bari ama galbeed ah oo Carabi ah? Midkee ayaad ugu jeceshahay? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoos lambarrada Carabiga ah, kala sooc
Tattoo ilmaha, kanaga yar had iyo jeer wuu kula socdaa
Balanbaalis iyo tattoos xiddiga